Tsy misy rano ve ny famantaranandro an'i Apple? Ity ny Marina! - Apple Watch
Pandora tsy hisokatra amin'ny iphone
imessage nalefa ho lahatsoratra
inona no ataonao rehefa mihena ny telefaoninao
Tsy misy rano ve ny famantaranandro an'i Apple? Ity ny Marina!
Vao naka Apple Watch ianao, fa tsy tokony hataonao raha eo akaikin'ny rano ianao. “Tsy misy rano ve izy io, sa mahatohitra rano fotsiny?” manontany tena ianao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hamaly fanontaniana roa lehibe aho:
Tsy misy rano ve ny Apple Watches?
Misy maha samy hafa ny fanoherana ny rano eo amin'ny Apple Watch Series 1, 2, ary 3?
Tsy misy rano ve ny famantaranandro an'i Apple?
Apple Watches dia tsia tsy tantera-drano , fa izy ireo mahazaka rano . Ankoatr'izay, ny Apple Watch Series 1 dia manana laharana fanoherana rano hafa noho ny Series 2 sy Series 3.
Fanoherana rano amin'ny Apple Watch Series 1
Ny Apple Watch Series 1 dia manana naoty fanoherana rano an'ny IPX7, midika izany fa natao ho mahatohitra rano izy rehefa milentika hatramin'ny iray metatra ao anaty rano. Ny 7 ao amin'ny IPX7 dia manondro fa ny Apple Watch Series One dia nahazo ny isa IP ambony indrindra amin'ny fanoherana ny rano. Ny isa IP avo indrindra azon'ny vokatra azo amin'ny fanoherana ny rano dia ny IPX8.
Fanoherana rano amin'ny Apple Watch Series 2 & 3
Ny Apple Watch Series 2 sy ny Series 3 dia samy manana ny laharana fanoherana rano 50 metatra ambanin'ny ISO Standard 22810: 2010. Manoro hevitra ny hitafy ny Apple Watch Series 2 na 3 fotsiny i Apple mandritra ny fanaovana hetsika amin'ny rano marivo, toa ny lomano lomano ao anaty pisinina. Tokony hisoroka ny fanaovana ny Apple Watch ianao rehefa manao ski ambony rano, mitety surf ary mitsorika scuba.
afaka mamerina iPhone 5s
Mila mamono hidin-drano ve aho?
Water Lock dia singa iray natolotra ho an'ny Apple Watch Series 2 ary mbola tafiditra ao amin'ny Apple Watch Series 3. Zava-dehibe ny fahalalana izany Ny Water Lock dia tsy tena mahatonga ny Apple Watch ho mahatohitra rano kokoa - manidy ny Apple Watch anao fotsiny izy io mba hisorohana ny paompy tsy nahy raha mampiasa azy eny ambonin'ny rano ianao.
Fanamarihana: Raha manomboka fampihetseham-batana Open Water Swim na Pool Swim ianao amin'ny fampiharana Workout, dia mandeha ho azy ny Water Lock.
Raha te hampirehitra ny Water Lock amin'ny tanana, kitiho avy eo ambanin'ny tarehy fiambenana ary kitiho ny kisary fitetezana rano. Ho fantatrao fa mandeha ny Water Lock rehefa mahita ny kisary fitetezana rano manga eo an-tampon'ny endrika fiambenana ianao.
Mba hialana amin'ny Water Lock, avadiho haingana ny Crown Digital, mandra-pahatongan'ilay teny nanokatra miseho amin'ny tarehin'ny fiambenana. Rehefa mamoha ny Apple Watch avy amin'ny Water Lock ianao dia mitendry feo mitete izay mandroaka ny rano mbola mipetaka ao anaty fiteniny.
Tsy mahazaka rano ve ny Apple Watch Bands?
Ny tarika Apple Watch sasany dia tsy misy rano, ny sasany mahatohitra rano, ary ny sasany tsy manome fiarovana amin'ny rano mihitsy. Matetika kokoa, ny tarika dia tsy mahazaka rano, fa tsy tantera-drano.
Tsy misy amin'ireo fantsona Apple Watch azonao vidiana mivantana amin'ny Apple fa tsy tantera-drano, fa maro no mahatohitra rano. Na izany aza, nilaza mazava i Apple fa ny tarika Milanese, Link Bracelet, Skin Loop, Modern Buckle, ary Classic Buckle dia tsy mahazaka rano.
Apple Watch Bands antoko fahatelo
Mitandrema amin'ireo mpivarotra amin'ny antoko fahatelo izay milaza fa tsy mahazaka rano ny tariny Apple Watch. Matetika, ny tariny dia mahazaka rano , tsy tantera-drano.
Raha mieritreritra ny hividy fantsona tsy misy rano ianao dia tadiavo ny isa IP an'ny tarika na ny naoty fanoherana rano hafa. Raha manana IP IP IP68 na IPX8 ny tarika dia midika izany fa manana ny haavon'ny rano-fanoherana avo indrindra izy, ka mahatonga azy io efa ho tantera-drano tanteraka.
maninona ny iphone 6-ko no tsy mandoa vola
Manarona rano amin'ny Apple Watch ve ny AppleCare?
AppleCare dia tsy miresaka mivantana momba ny fanaronana rano simba, fa manarona ny Apple Watch anao amin'ny tranga roa nahitana fahasimbana tsy nahy, izay samy iharan'ny saran'ny serivisy.
Zava-dehibe ho anao ny mahalala izany ny fahasimban'ny rano dia tsy rakotra ao amin'ny drafitra AppleCare ho an'ny iPhones , noho izany aza gaga raha mahazo saran'ny serivisy lehibe avy amin'ny Apple ianao.
Izahay dia tsy afaka manome toky fa ho voasarona ny fanamboarana anao, saingy tsy maninona ny mitondra ny Apple Watch ao amin'ny Apple Store anao eo an-toerana ary asaivo mijery izany izy ireo. Alohan'ny handehananao dia manoro hevitra izahay famandrihana fotoana hahazoana antoka fa hisy olona hanampy anao.
Fotoana hilomano sasatra sasany
Ankehitriny rehefa mahafantatra bebe kokoa momba ny Apple Watch ianao dia azonao atao ny mitondra azy am-pahatokisana any amoron-dranomasina na dobo filomanosana. Ary rehefa misy manontany anao hoe: “Tsy misy rano ve ny Apple Watches?” ho fantatrao tsara izay holazaina amin'izy ireo! Raha manana fanontaniana Apple Watch hafa ianao dia avelao izy ireo eto ambany ao amin'ny faritra misy ny hevitra.